Xisbiyada oo maanta u fariistay wada hadalada ay xukuumad kusoo dhisayaan. - NorSom News
Home Politikk/siyaasad Xisbiyada oo maanta u fariistay wada hadalada ay xukuumad kusoo dhisayaan.
Bartamihii bishii Desember ee lasoo dhaafay ayuu xisbiga Venstre sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal ka furo kamid noqoshada xukuumada Erna Solberg ee ka kooban xisbiyada Høyre iyo Venstre. Waxaana maanta oo talaado ah si rasmi ah u bilaabanaya wada hadalada ay xisbiyadan kusoo dhisayaan xukuumada cusub, ayna heshiis ku gaarayaan.
Wadahadalada xisbiyada ayaa maanta ka furmay hotelka Jeløy ee magaalada Moss. Waxaana lagu wadaa in qiyaastii ay socdaan ilaa 15 maalmood, kahor inta aysan soo bandhigin waxa ay ku heshiiyeen.
Venstre: Sadex wasiir oo cusub.
Sida ay ilo katirsan dowlada u sheegeen qaar kamid ah warbaahinta, xisbiga Venstre ayaa lagu wadaa inay xukuumada Solberg ka helaan ilaa sadex wasiir, inkasta oo dadka qaar ay aaminsanyihiin inay heli karaan afar wasiir. Gudoomiyaha xisbiga Venstre Trine Skei Grand ayaa iyadana lagu wadaa inay noqoto wasiirka waxbarashada ama dhaqanka.
Qodobada ugu adag ee la filayo inay dooda ugu badan ka galaan xisbiyadan ayaa waxaa kamid ah mida ku saabsan cimilada iyo deegaanka, iyada siyaasada arimaha soo galootiguna ay kamid tahay doodaha ugu adag ee la filayo inay xisbiyadan galaan. FRP ayaa horey Venstre uga digay inay isku dayaan inay furfuraan siyaasada soo galootiga, iyaga oo cadeeyay inuu FRP kamid noqon doonin xukuumad jilcisa siyaasada adag ee soo galootiga Norway.
Sida ay qoreen warbaahinta qaar, waxaa dhici karta in FRP ama Høyre midkood ay dajiyaan siyaasada soo galootiga, xisbiga Venstre-na loo daayo siyaasada isdhexgalka bulshada.
Sadexda xisbi ee maanta u fadhiisayana wada hadalada xukuumad dhisada, ayaa isla wada qiray inaysan wada hadaladan noqon doonin kuwo fudud. Erna Solberg oo afartii sano ee ugu danbeysay la daalaa dhaceysay isku heynta afarta xisbi ee taageersanaa siyaasad ahaan, ayaa waxaa sugi doono shaqo adag oo ah inay hogaamiso xukuumad ay kamid yihiin labo xisbi oo aragti aad u kala fog meelaha qaar.
Previous articleXaqiijin: Mid kamid ah dhalinyaradii Trandum ku xirneyd oo Muqdisho laga dajiyay, iyo kuwa kale oo isbuucan la tarxiilo doono.
Next articleTV2: Ugu yaraan 199 qof oo laga ceshtay magangalyada, kadib markii la ogaaday inay ka been sheegeen aqoonsigooda.
Abid Raja oo gudoomiye ku xigeen baarlamaan loo doortay!
Keydka NorSom Velg måned mars 2021 (2) februar 2021 (52) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (54) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)